Baby Memory Book: xasuus Qoyska Photo Book Records Sweet
> Resource > Talooyin > Baby Memory Book Fikradaha: All ku saabsan Geedi-First
Baby Memory Book Fikradaha: All ku saabsan Geedi-First
Hal ilmo haysato waa mid aad u gaar ah Aabaha iyo hooyada. Marka ilmuhu dhasho, hooyo iyo aabbe dunida u imid, sidoo kale. Waalidiinta intooda badan waxay u muuqdaan in nafo la joogo kasta oo dhacdooyinkaasi horumarinta ah. Laakiin waxa sida ugu fiican? Waxaa laga yaabaa in a buug xasuus ilmaha waa jawaabta. Waxay kaa caawinaysaa in ay u qoraan maalmood ah ilaa iyo sidoo taasoo keentay in dhalmada oo dhan Hawlaha ugu horeysay, sida dhoola ugu horeysay, qososhay hore, tallaabo hore, hore socod, iyo wixii la mid ah.
Maxaad a Baby Memory Book
1. Maalka muddo nolosha . Inkasta oo dharka iyo alaabta way siiyey, buugaagta xasuus ilmaha weli waa maalka matalno qoyska. Cunuga waxaa laga yaabaa koray ognahay waxa ay u eg marka ay weli aad u yar yar, iyo waalidiinta reminisce kara faahfaahinta soo kasta la higsanayo.
2. Xusuusaha in ay ku xidhmaan ab . Ma aha oo kaliya ilmaha laftiisa jeclaan lahaa in ay daawadaan buugaagta xasuus ilmaha, ayeeyo jacayl, sidoo kale. Iyadoo buug xasuus ilmo, iyagu waxay ogaan kasta si faahfaahsan oo dhan Dhacdooyinka hore. Waxa uu leeyahay macne gaar ah ayeeyo ee ku nool fog ilmaha. Dhinaca kale, awoowe u baran karin nolosha ay ayeeyo / awoowe ee iyada oo ay buuga xasuusta ilmaha!
3. Qaab kale oo ay u qabanqaabiyaan photos ilmaha . Waa in ay jiraan culaysyo sawirro ilmaha, oo mid waluba wuxuu u muuqataa wax aan macquul aheyn inay iska bixin. Buug xasuus Ilmaha ku jira ayaa laga yaabaa in alla intii photos ilmaha garab qurxinta qurux badan sida xadhiga ka qubeyska ilmaha, hadiyad duuban, kaarka martiqaad, iwm
Baby Memory Book Fikradaha iyo talooyin
Ka samee buug xasuus ilmo ma aha sida adag tahay sida ay u muuqato ilaa iyo inta aad rabto in aad oo ay waqtiga firaaqada ah qaar ka mid ah. Iyo rajo kuwan fikrado buug xasuus ilmaha ka caawisaa.
1. Dooro mawduuc. theme A go'aan ka gaara sida buug xasuus ilmaha u eg yahay iyo waxa la mid ah gudaha buugga sawirka. Haddii aad la digital software buugga sawirka, waxa kale oo la xidhiidha doorashada ee bogagga template buugga sawirka. Mawduucyada Kuwani waa caan ah, isboortiga, cartoon, music, Christmas, iyo wixii la mid ah.
2. Ka hor inta ilmaha . Dad badan ayaa laga yaabaa in la qorsheeyo si ay u sameeyaan buug xasuus ilmo dhasho ka dib ilmaha. Dhab ahaantii, waxaa jira waxyaabo aad u badan ka hor dhalashada ilmaha waa in la xusuusto, sawirka ultrasound iyo natiijada baaritaanka jirka, reyn yaabban jinsiga ah (waa wiil ama waa gabar?), Qurxinta qolka xanaanada, qubeyska ilmaha. Oo waxyaalahaas oo dhan, wax walba oo dhacay halka guud ee qoyska waxaa sugaya xubin cusub lagu dari karaa buug xasuus ilmaha lagu daro Hawlaha hore.
3. Sawir la caption . Ku dar qaar ka mid ah qoraalka lagu qoslo in sawirada. Buug xasuus ilmaha waa meel si uu u sameeyo qof kasta ku qososho, iyo ilmo ugu faraxsanahay Wabiyaalkii.
4. Xusuusaha ee qoyska oo idil . Buugaagta xasuus Baby qortid xasuus ah ilmaha hore, laakiin waxa aad u fiican waxaa ka mid ah xusuus lahaa xubnaha kale ee ay leeyihiin ilmaha si uu isaga / iyada ayaa dib ugu yeeran sano ka dib.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan aabbihiis iyo hooyadiis, oo casri ah uma haysto waqti badan oo lagu qarashgareeyo buug xasuus ilmaha, gaar ahaan marka ay haystaan ​​cunugoodii ugu horeeyay. Waxaa jira waxyaabo badan oo ay wax ku bartaan, in ay is ogow oo ay u diyaar garoobaan. Nasiib wanaag, iyadoo la kaashanayo buugga sawirka software- DVD Muqaal dhise , waa fududdahay in la abuuro buug xasuus ilmaha.
Top 20 Waalidnimada Video Goobaha si Baro Waalidnimada Skills
Maxaa la qoro Your Dhigashada Maydho Baby
Baby Liiska Dhashay: Time si Laysu Diyaariyo Wax walba
Sida loo abuuro a Facebook Photo Muqaal la Music
15 Talooyin iyo tabaha in Dhig Windows Phone 8 More oolka ah
Dhigashada Maydho caruusadaha - Samee gaar ah caruusadaha Cards Martiqaad Maydho
Wedding Martiqaad Card - Sida loo DIY gaar Martiqaad Wedding Card
Waa maxay Features in lagu daraa in Online Imtixaanka System
Sidee si ay u daabacaan aalaha si Web
Maalinta Jacaylka Song Fikradaha
Sida loo dalbado Black iyo White Photo Saamaynta